Home Wararka Waare oo sheegay qorshaha Wasiirada & Madaxda DG u dhaw Farmaajo, kuna...
Waare oo sheegay qorshaha Wasiirada & Madaxda DG u dhaw Farmaajo, kuna tilmaamay shirqool
Madaxweynihii labaad ee DG Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi ku eedeeyay in uu ku tuntay dastuurka Dalka isla markaana uu galay dambiyo kala duwan.
Waare oo la hadlay Hanoolaato waxa uu sheegay Farmaajo uu isku dayay afgambi dhicisoobay 27kii December 2021 kaddib markii Ra’iisul Wasaare Rooble uu kahor istaagay in uu tago Xafiiskiisa & kan Xukuumadda balse aanay u suuragelin sida uu u qorsheeyay.
Maxamed Cabdi Waare ayaa tilmaamay in Dastuurka Dalka qof weliba uu u fasirtay sida uu rabo si uu danihiisa gaarka ah uga dhex helo ama ugu fushado waxyaabaha uu doonayo sida uu hadalka u dhigay.
“Dastuurku wuu cad yahay, madaxweynaha ilaa inta madaxweyne kale laga dooranayo xafiiska ayuu sii joogaa meel ay dastuurka uga taallo ma jirto, haddii xitaa lagu doodi lahaa Baarlamaanka ayaa ansixiyay ma jirto, qof weliba rabitaankiisa ayuu wax u fasirtay” ayuu yiri Waare.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayuu sheegay in saq dhexe la weeraray Xafiiskiisa, waxa uu ku bogaadiyay tallaabada uu ku qaatay go’aanka uu ku adkeystay in Maxamed Xuseen uu galo xafiiska sida uu hadalka u dhigay Maxamed Cabdi Waare.
“Afgambiga Dhicisoobay” haddii uu u dhici lahaa sida loo qorsheeyay waxa uu Maxamed Waare sheegay in tallaabada xigta ay noqon lahayd in la xiro Wasiirka koowaad ee Xukuumadda Federaalka Balse laga hortagay.
“Farmaajo waxa uu yaqaanaa dagaal qofka dadkiisa lagu hor karaamo-tirayo, waxa uu biyaha & korontada ka goystay Guddoomiyihii Baarlamaanka, waxa uu lug ku qasbay Ra’iisul Wasaaraha XFS, Farmaajo in uu Villada ka baxo & in uu ku jiro wax micno ah malaha” ayuu yiri Madaxweynihii hore ee Hir-Shabeelle.
Waare waxa uu Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble kula taliyay in uusan talada gacantiisa markale ka saarin, halka uu wadahadal la geli lahaa Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday uu xoogga ka saaro qabashada Doorashada.
“Farmaajo fursadda uu helay waxaa siiyay Ra’iisul Wasaaruhu oo ay horay heshiis u galeen, waxa aan leeyahay Ra’iisul Wasaare talada gacantaada ku jirto markale ha iska saarin, Wasiirada & Madaxweyne Goboleedyada u dhaw Madaxweynaha wadahadal lama dhaho waa hoosaasin waana tii badda geliyay tookadii hore” waa sida uu yiri Maxamed Cabdi Waare.
“Madaxweynaha markii uu weeraraayay Guddoomiyaha Baarlamaanka, Aqalka Sare, markii uu tuurayay Ra’iisul Wasaaraha dadku way arkayeen in ay ahayd hub uruursi balse waxaa looga baaqsaday is hor istaagga Madaxweynayaasha Jubbaland & Puntland” waa sida uu yiri Maxamed Cabdi Waare.
Previous articleShirkii GWQ ee maanta oo qaatay talooyinkii Farmaajo, waqtigiisana dheeraan doono
Next article[XOG] Mareykanka iyo Ingiriiska oo ka hortegay Qorshe ay Qoorqoor iyo Lafta-gareen ku fashilin rabeen shirka
Shirkii Dhuusomareeb oo fashil ku dhammaaday “Axmed Madoobe oo saxaafadda la...
Beesha Caalamka oo dul dhigi doonta [Farmaajo] in uu yahay KHAS...